ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအလိုက် အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုအခြေအနေ
1 Dec 2017 . 10:16 AM
၂ဝ၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တုန်းက ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ (Saudi Arabia) မှာ အမျိုးသမီးတွေကို ယာဉ်မောင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါဥပဒေဟာ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇွန်လမှသာ အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက် တစ်ဆင့်နှိမ်လူတန်းစားအဖြစ် မြင်နေကြတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသာတွေလို တန်းတူအခွင့်အရေး တောင်းဆိုနေကြပေမယ့် ခွဲခြားမှုတွေက ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဝေးနိုင်ငံ (Norway) အော်စလိုမြို့ (Oslo) ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေသုတေသနတက္ကသိုလ် (Peace Research Institute) မှ ပညာရှင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့ (၁၅၃) နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုနဲ့ လုံခြုံရေးတွေအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တန်းတူအရှိဆုံးနိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံနဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး (၅) နိုင်ငံကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုအခြေအနေ – Forbes
အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးကို ပျမ်းမျှရမှတ် (၁) အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ပျမ်းမျှရမှတ်နည်းလေ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရလေလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် နေချင်စဖွယ်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကတော့ ပျမ်းမျှရမှတ် ဝ.၈၈၆ နဲ့ အိုက်စလန်နိုင်ငံ (Iceland) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး အမြင့်မားဆုံး အိုက်စလန်နိုင်ငံမှာတောင် ပျမ်းမျှရမှတ် (၁) မရှိသေးတဲ့အတွက် ကမ္ဘာတလွှားမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုရှိနေတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် (၁) အိုက်စလန် (Iceland) – ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၈၆)
အဆင့် (၂) နော်ဝေး (Norway) – ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၇၉)
အဆင့် (၃) ဆွတ်ဇာလန် (Switzerland) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၇၁)
အဆင့် (၄) စလိုဗေးနီးယား (Slovenia) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၆၁)
အဆင့် (၅) စပိန် (Spain) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၆ဝ)
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ (Syria) က ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၃၈၅) နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နေပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားအဖြစ် ရပ်တည်နေကြပြီး အမျိုးသားတွေရဲ့နောက်မှာပဲ နေကြရပါတယ်။
အဆင့် (၁၅၃) ဆီးရီးယား (Syria) – ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၃၈၅)
အဆင့် (၁၅၂) အာဖဂန်နစ္စတန် (Afghanistan) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၃၈၅)
အဆင့် (၁၅၁) ယီမင် (Yemen) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၄ဝ၇)
အဆင့် (၁၅ဝ) ပါကစ္စတန် (Pakistan) ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၄၄၁)
အဆင့် (၁၄၉) Central African Republic ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၄၇၄)
အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၈၁ဝ) နဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် (၂၂) မှာ ရပ်တည်နေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရှေးရိုးစွဲအယူအဆတွေနဲ့ ချိုးနှိမ်ထားတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပျမ်းမျှရမှတ် (ဝ.၆ဝ၆) နဲ့ နိုင်ငံပေါင်း (၁၅၃) နိုင်ငံမှာ အဆင့် (၁၁၉) မှာ ရပ်တည်နေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်ဘာ့နိုငျငံအလိုကျ အမြိုးသမီးတနျးတူအခှငျ့အရေး ရရှိမှုအခွအေနေ
၂ဝ၁၇ခုနှဈ စကျတငျဘာလ (၂၆) ရကျနတေု့နျးက ဆျောဒီအာရဗေနြိုငျငံ (Saudi Arabia) မှာ အမြိုးသမီးတှကေို ယာဉျမောငျးခှငျ့ပွုလိုကျပွီဖွဈပမေယျ့ အဆိုပါဥပဒဟော ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဇှနျလမှသာ အသကျဝငျမှာဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှမှော အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျ တဈဆငျ့နှိမျလူတနျးစားအဖွဈ မွငျနကွေတုနျးပဲဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသာတှလေို တနျးတူအခှငျ့အရေး တောငျးဆိုနကွေပမေယျ့ ခှဲခွားမှုတှကေ ရှိနဆေဲပငျဖွဈပါတယျ။
နျောဝေးနိုငျငံ (Norway) အျောစလိုမွို့ (Oslo) ရှိ ငွိမျးခမျြးရသေုတသေနတက်ကသိုလျ (Peace Research Institute) မှ ပညာရှငျတှဟော ကမ်ဘာ့ (၁၅၃) နိုငျငံမှ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အခှငျ့အရေး၊ တရားမြှတမှုနဲ့ လုံခွုံရေးတှအေတှကျ စဈတမျးကောကျယူခဲ့ပွီး အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး တနျးတူအရှိဆုံးနိုငျငံ (၅) နိုငျငံနဲ့ အဆိုးဝါးဆုံး (၅) နိုငျငံကို ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။
အမြိုးသမီးတနျးတူအခှငျ့အရေး ရရှိမှုအခွအေနေ – Forbes
အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီး တနျးတူအခှငျ့အရေးကို ပမျြးမြှရမှတျ (၁) အဖွဈ သတျမှတျပွီး ပမျြးမြှရမှတျနညျးလေ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရလလေို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ နခေငျြစဖှယျအကောငျးဆုံးနိုငျငံကတော့ ပမျြးမြှရမှတျ ဝ.၈၈၆ နဲ့ အိုကျစလနျနိုငျငံ (Iceland) ပဲဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး အမွငျ့မားဆုံး အိုကျစလနျနိုငျငံမှာတောငျ ပမျြးမြှရမှတျ (၁) မရှိသေးတဲ့အတှကျ ကမ်ဘာတလှားမှာ အမြိုးသမီးတှဟော ခှဲခွားဆကျဆံခံရမှုရှိနတေယျလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
အဆငျ့ (၁) အိုကျစလနျ (Iceland) – ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၈၆)
အဆငျ့ (၂) နျောဝေး (Norway) – ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၇၉)
အဆငျ့ (၃) ဆှတျဇာလနျ (Switzerland) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၇၁)
အဆငျ့ (၄) စလိုဗေးနီးယား (Slovenia) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၆၁)
အဆငျ့ (၅) စပိနျ (Spain) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၆ဝ)
အမြိုးသမီးအခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရမှုအမြားဆုံးနိုငျငံအဖွဈနဲ့ ဆီးရီးယားနိုငျငံ (Syria) က ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၃၈၅) နဲ့ ထိပျဆုံးမှ ရပျတညျနပေါတယျ။ အဲဒီနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီးတှဟော ဖိနှိပျခံလူတနျးစားအဖွဈ ရပျတညျနကွေပွီး အမြိုးသားတှရေဲ့နောကျမှာပဲ နကွေရပါတယျ။
အဆငျ့ (၁၅၃) ဆီးရီးယား (Syria) – ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၃၈၅)
အဆငျ့ (၁၅၂) အာဖဂနျနစ်စတနျ (Afghanistan) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၃၈၅)
အဆငျ့ (၁၅၁) ယီမငျ (Yemen) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၄ဝ၇)
အဆငျ့ (၁၅ဝ) ပါကစ်စတနျ (Pakistan) ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၄၄၁)
အဆငျ့ (၁၄၉) Central African Republic ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၄၇၄)
အဖှံ့ဖွိုးဆုံးနိုငျငံလို့ သတျမှတျထားကွတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံမြိုးမှာတောငျ ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၈၁ဝ) နဲ့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ (၂၂) မှာ ရပျတညျနတေုနျးပဲဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ ရှေးရိုးစှဲအယူအဆတှနေဲ့ ခြိုးနှိမျထားတုနျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီစာရငျးမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံဟာ ပမျြးမြှရမှတျ (ဝ.၆ဝ၆) နဲ့ နိုငျငံပေါငျး (၁၅၃) နိုငျငံမှာ အဆငျ့ (၁၁၉) မှာ ရပျတညျနတေုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
by Htet Htet . 24 hours ago